6. Religious (Application Form) | Consulate-General of the Republic of the Union of Myanmar, Los Angeles, U.S.A
Home » Data » 6. Religious (Application Form)
Requirement: Religious PPT Renewal Form
(စ) သာသနာရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကိုင်‌ဆောင်သူများ လျှောက်ထားရန် ညွှန်ကြားချက်
– ရောင်စုံဓာတ်ပုံ(၂)ပုံ ( ၆ အတွင်း ရိုက်ကူးထားသောဓာတ်ပုံ၊ အရွယ်အစား ၂” x ၂”၊ နောက်ခံအဖြူ) (ဓာတ်ပုံတစ်ပုံအား ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်တွင် ကပ်ပေးပါရန်)
– ထိုးမြဲလက်မှတ်(လျှောက်ထားသူမှ လျှောက်လွှာနှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ပြရမည့် သတ်မှတ်ထားသော ပုံစံတွင် ထိုးမြဲ လက်မှတ်အား ရေးထိုးပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။)
– အ‌မေရိကန်နိုင်ငံတွင် အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ကတ်ပြား ရောင်စုံမိတ္တူ ၊သို့မဟုတ်၊ ဗီဇာ အ‌ထောက်အထား၊ သို့မဟုတ်၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် အ‌ထောက်အထား
– သက်ဆိုင်ရာ သီတင်းသုံးသည့် ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်၏ ထောက်ခံချက်၊ သို့မဟုတ်၊ ကျောင်းဂေါပကအဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက်၊ သို့မဟုတ်၊ သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းမှ ထောက်ခံချက်
Religious PPT Renewal Form